Bonnie & Clyde ( 2013 ) - Myanmar Asian TV
Bonnie and Clyde ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကြားဖူးသူတွေ ရှိကြမယ်တော့ ထင်ပါတယ် … ဟုတ်ပါတယ် villain couple တွေကြားမှာ ထင်ရှားတဲ့ couple အဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ် … superhero universe တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DC က Joker နဲ့ Harley Quinn ပြီးရင် နောက်ထပ်လူသိများကျတဲ့ villain စုံတွဲပါ … ဒါပေမဲ့ Bonnie နဲ့ Clyde ကတော့ Fiction တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ တကယ် တည်ရှိခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ …
လူတွေကို ဓားပြတိုက် သတ်ဖြတ် , ဘဏ်တွေကို ဝင်ဖောက် စတဲ့ ဒုစရိုက်မျိုးစုံတွေကို တက်ညီလက်ညီလုပ်ပြီး နှစ်ယောက်သားအတူတူပဲ ပွဲချင်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပါ …
ယခုဇာတ်ကားလေးကတော့ သူတို့အကြောင်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပြီး 2013 ခုနှစ်မှာ A&E Network က အပိုင်း ၂ ပိုင်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Mini Series လေးတစ်ခုပါ … ဒါပေမဲ့ ယခုတင်တာတော့ ၂ ပိုင်းစာကို ပေါင်းပြီး Movie တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ တင်လိုက်ပါတယ် … စုစုပေါင်းကြာမြင့်ချိန်က ၃ နာရီ နီးပါးကြာမြင့်ပါတယ် …
တောရွာလေးမှာ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ Clyde ဟာ မြောင်းဖော်လယ်စိုက် , သူများလယ်မှာနေ့စားလုပ်ရတဲ့၊ ကားတွေကိုအရမ်းရူးသွပ်တဲ့ Clyde ရဲ့ဘဝဟာ Bonnie Parker ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစတင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ် …
Bonnie နဲ့ Clyde ဟာ Bonnie ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအပြီး ယောကျာ်းနဲ့ခရီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစတွေ့ပါတယ် … အမှန်တော့ Clyde ဟာ Bonnie ကို သူကလေးဘဝအိမ်မက်ထဲမှာထဲက တွေ့ခဲ့တာပါ … Clyde ငယ်စဉ်က အမည်မတပ်နိုင်တဲ့အဖျားရောဂါရခဲ့ပါတယ် … သေလုနီးပါးဖြစ်ပြီး မြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကယောင်ကတမ်းအိမ်မက်တွေ မက်ပါတယ် … အိမ်မက်ထဲမှာအရမ်းလှတဲ့အမျိုးသမီးက သူ့ကိုစောင့်နေမယ်လို့ပြောပါတယ် … အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ Bonnie ပါပဲ …
သူတို့နှစ်ဦးအပြင်မှာ တွေ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကလိုက်ဟာသူတစ်ဘဝလုံး ရှာနေခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ Bonnie ပဲလို့ သိသွားပြီး ချဉ်းကပ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် … Bonnie ကတော့ နာမည်ကျော်ကြားမှုကို အရမ်းမက်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ … အမေနဲ့တူတူကြီးပြင်းလာပြီး သူမအိမ်မက်ကတော့ ပြဇာတ်မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ပါ …
နောက်ပိုင်းကျတော့ ချမ်းသာအောင်မြင်ပြီး အကောင်းဆုံးတွေပဲမက်တဲ့ Bonnie နဲ့ သူမဆန္ဒဆိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ Clyde တို့နှစ်ဦး ဘယ်လိုတွေ့ဆုံပြီး လက်တွဲကြမလဲ? ဘယ်လိုစပြီး မကောင်းမှုတွေကိုကျုးလွန်ကြမလဲ? သူတို့ဘဝ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားမလဲ ? ဆိုတာ သံဝေဂရစရာတွေနဲ့ ကြည့်ရမယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် သမိုင်းနောက်ခံ ဒုစရိုက်ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ….
Clyde Barrow နေရာမှာတော့ Emile Hirsch က ပါဝင်ထားပြီး Bonnie Parker နေရာမှာတော့ Holliday Grainger က ပါဝင်ထားပါတယ် …
Translator : Su Latt
Actors: Austin Hébert, Dale Dickey, Elizabeth Reaser, Emile Hirsch, Holliday Grainger, Holly Hunter, Lane Garrison, Sarah Hyland, William Hurt
Openload.co Myanmar 1.5 GB Download Soliddrive.co Myanmar 1.5 GB Download Drive.google.com Myanmar Coming Soon Download
Trailer: Bonnie & Clyde ( 2013 )